LEGO ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပါ Ideas ၂၁၃၂၅ အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာတစ် ဦး သည်ကျီတစ်ခုထဲသို့
01 / 10 / 2021 01 / 10 / 2021 ရော့ Paton 369 Views စာ0မှတ်ချက် 21318 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ, ရဲတိုက်, Lego, Lego ရဲတိုက်, Lego Ideas, စကခ, ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး, ရေနံချောင်း, ပြန်. ဆောက်လုပ်
Lego Ideas 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော Castle-themed ပုံစံများကိုမည်သည့်နံပါတ်သို့ပြောင်းရန်အတွက်အခြေခံသည်-ဤအရာသည်မည်သို့ဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုဥပမာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ အကောင်းဆုံးတွေထဲကတစ်ခုဆိုတာမငြင်းနိုင်ပါဘူး Lego Ideas ယနေ့ခေတ် Castle Castle ဆောင်ပုဒ်ဟောင်းကိုလွမ်းဆွတ်ဖွယ်ဆွဲဆောင်မှုကိုဖမ်းယူကာအယူအဆ၊ အကြောင်းအရာနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်လှည့်ကွက်အသစ်တစ်ခုကိုပေးနေသည်။ င်း တည်ဆောက်ရန်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပြခန်းတွင်ကြည့်ရှုရန်အံ့သြဖွယ် တစ်ကြိမ်ပြီးမြောက်သည်။ ၎င်းသည် ap ကိုယူရန်အလားအလာအပြည့်အစုံရှိသည်art နှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါ။
၎င်းသည်အတော်လေးထူးခြားသောပလက်ဖောင်းဖြစ်သည် ရေနံချောင်းမရ။ ၎င်းသည်လူများအတွက်ခံနိုင်ရည်ရှိနေသေးသဖြင့်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံရန်ဝေးသေးသည် သူတစ်ပါး၏အလုပ်အားတင်ခြင်းနှင့်၎င်းအားတောင်းဆိုခြင်းဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ပုံစံတွေကိုတည်ဆောက်ဖို့မော်ဒယ်သစ်တွေရှာဖွေရတာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်ကြီးမားပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာပလက်ဖောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် Lego အစုံ။
၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်လုံးဝအသစ် (သို့) လက်ရှိအရာရှိတစ် ဦး အားပြုပြင်မွမ်းမံမှု (သို့) အပိုအဖြစ်သုံးသောသုံးစွဲသူများထံမှစိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်မှုများကိုလက်ခံသည်။ Lego set နှင့် p ကိုပေးထားပါတယ်artထိုတည်ဆောက်မှုများအတွက်စာရင်းများနှင့်ညွှန်ကြားချက်များ
၀ က်ဆိုက်ပေါ်ရှိအခြားအသုံးပြုသူများသည်လည်းပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသောအရာများကိုတရားဝင်တင်ကြသည် Lego p များကိုသာအသုံးပြုသည်artလုံးဝပုံစံအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်မည်သည့် set မှမဆိုရနိုင်သည်။ ဤနာက်ထုံးစံသို့ချဉ်းကပ်သည် Lego ပုံစံဒီဇိုင်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည် - အုတ်အကန့်အသတ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် site ပေါ်တွင်အချို့သောသူများသည်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောမော်ဒယ်အချို့ကိုစုစည်းရန်အံ့သြဖွယ်ဖန်တီးမှုအချို့ကိုသော့ဖွင့်ကြသည်။
Gr33tje13 သည်ဤကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဤအင်္ဂါရပ်၌ကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းရှာဖွေနေသောပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏တင်မှုများအားတစ်ချက်ကြည့်သည် အုတ်များနှင့် p များကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ထင်ရှားသောစွဲမက်မှုကိုပြသည်artအဲဒါတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုတယ် 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ၎င်းမှအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံခုနစ်မျိုးဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည် Ideas တစ်ယောက်တည်းသတ်မှတ်
အကြားစုတ်ပြဲသွားသည် လေရဟတ်စက် နှင့် ကျီငါတို့သည်၎င်းသည်မူလပန်းဘဲသမားနှင့်ပိုမိုခြားနားသောအဆောက်အအုံတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်စုစည်းရန်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည်။ တရားဝင်ဘယ်မှာလဲ Ideas set သည်အထပ်မြင့်သုံးထပ်အဆောက်အအုံဖြစ်ပြီး Barn သည်တိုတို၊ ကျယ်၊ နှစ်ထပ်ဆောက်လုပ်သည်။
Rebrickable မှအချို့သောသုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ဖန်တီးမှုများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သောအချိန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အခကြေးငွေတောင်းခံပြီးအခြားသူများသည်လမ်းညွှန်ချက်များကိုအခမဲ့တင်လိမ့်မည်။ Barn အတွက်ညွှန်ကြားချက်များအတွက်€5အခကြေးငွေသည် p နှင့်အတူကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်artပုံစံ၏အရည်အသွေးကိုအလေးအနက်စဉ်းစားခြင်းနှင့်စာမျက်နှာ ၁၇၆ မျက်နှာရှိသော PDF စာရွက်စာတမ်းတစ်လျှောက်တည်ဆောက်မှုအဆင့် ၂၀၉ ဆင့်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ညွှန်ကြားချက်များကိုငွေပေးပြီးဒေါင်းလုပ်ချပြီးနောက်တည်ဆောက်မှု၏ပထမအဆင့်သည်နာကျင်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သင် p အိတ်များအားလုံးကိုဖွင့်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။artအဘို့အ s ကို 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ အသိတစ်ခုခုရလျှင် (သို့မဟုတ်) တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးသည်နှင့် part ၎င်းတို့ကိုယုတ္တိနည်းအရသတ်မှတ်သည်။
ဤဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် p စီရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်artအပိုင်းအနည်းငယ်သို့ s - အညိုရောင်အပိုင်းပိုင်းအားလုံးနီးပါး SNOT (ထိပ်တွင်မထားပါ) parts; ပန်းကန်အားလုံး; အုတ်အားလုံး; တောင်စောင်းများနှင့်ပြောင်းပြန်တောင်စောင်းများ၊ နောက်ဆုံးတော့အမျိုးမျိုးသောအပိုင်းများ ၎င်းသည်အချိန်ကုန်သောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်မစီစဉ်ရသေးသော p ပုံတစ်ပုံကို ဖြတ်၍ ၀ ယ်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုကယ်တင်သည်။artဒါက st မှာart ၂,၁၆၄ တွင်ရေတွက်သည်။
တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအရ Gr33tje13 ၏ပုံစံသည်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုဆင်တူသည် Lego သတ်မှတ် သို့သော်တည်ဆောက်မှုအဆင့်၊ ကစားနိုင်မှုနှင့်တည်ဆောက်ပုံသမာဓိပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပုံမှန်စည်းမျဉ်းများကဲ့သို့သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားမှုများရှိသည် Lego Group သည်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသောဒီဇိုင်းများနှင့်လိုက်ရန်ဤနေရာတွင်လိုက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
၎င်းကိုရံဖန်ရံခါချောင်များ (သို့) အဆက်အစပ်မရှိသောအုတ်များနှင့်ရောနှောပြီးအချို့ကတစ်လျှောက်လုံးတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးအနည်းငယ်ဆန်းကြယ်သောတည်ဆောက်ပုံနည်းစနစ်များကိုဘာသာပြန်သည်။ သင်လောကထဲသို့ ၀ င်ပါကဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ပါ Lego fan building၊ အဲဒါပြည့်နေတယ် ideas ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်မှု၊ ဤပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းသည်ထိုအရာအတွက်ကြီးမားသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုံစံအတွက်ရှုထောင့်များသည်စုဝေးရန်အချိန်ပိုရသော်လည်း (p နှင့်အတူ)artအိမ်ခေါင်မိုးမှ icular အသိအမှတ်ပြုမှု) နောက်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်ကျွမ်းကျင်မှုကိုနားလည်ကြောင်းပြသသည် Lego ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် ၃၆၀ ဒီဂရီပတ်လည်ရှိအသေးစိတ်နှင့်ဇာတ်လမ်းပါ ၀ င်သောအလွန်ထူးခြားသောနောက်ဆုံးမော်ဒယ်
p ၌ထူးခြားသည်articular သည် p ကိုသာ သုံး၍ ဤပုံစံကိုမည်သို့တည်ဆောက်ထားသည်artမိတ္တူတစ်စောင်မှ s 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ (အနည်းငယ်ပိုသောအပိုပစ္စည်းများကျန်ရှိသည်) ၎င်းသည်အနုအရင့်အနေနှင့်၎င်းသည်စတိုင်လ်၊ စတိုင်လ်၊ အသံနေအသံထားနှင့်အပြင်အဆင်တို့နှင့်လုံး ၀ မသက်ဆိုင်ဘဲ၊
ပျော်စရာကောင်းပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာအားလုံးလောက်ကို 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ Gr33tje13's Barn ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည် st အတွက်ပြုလုပ်သည်art စရိုက်လက္ခဏာနှင့်ကျက်သရေအပြည့်ရှိသောအလယ်ခေတ်ကျေးရွာတစ်ခု ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းသည်ယခင်အဟောင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခု (သို့) နှစ်သက်သောအစုတစ်ခု၏ဒုတိယကော်ပီဖြင့်တည်ဆောက်ရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတိပေးသည်၊ သင်ကျီကိုစုမိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အခြားပြန်လည်တည်ဆောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုသင်ကြည့်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့မှဤမိတ္တူကိုပေးသည် 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ ဤအင်္ဂါရပ်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင်၏ဒုတိယ၊ တတိယနှင့်စတုတ္ထမိတ္တူများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်သည် Lego Ideas 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← လူကြီးများအတွက် LEGO 10293 Santa's Visit ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Lego Monkie Kid Amazon Prime Video တွင်တီဗီရှိုးကိုယခုရနိုင်သည် →